सुविधाभोगी शासक, भोक र प्यासमा जनता, के यही हो “समृद्ध नेपाल-सुखी नेपाली” ? – Mission Khabar
सुविधाभोगी शासक, भोक र प्यासमा जनता, के यही हो “समृद्ध नेपाल-सुखी नेपाली” ?
मिसन खबर १६ पुष २०७५, सोमबार ०५:५२
काठमाडौं–सरकार र मन्त्रीको मुखमा सधै सुशासन र समृद्धिको भाषण । अनि प्रधानमन्त्रीको अभियान “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” । तर ब्यवहारिकतामा भने अलि फरक । यस्तै चलिरहेको छ, हाम्रो देशमा ।
भ्रष्टाचार र ब्यतिथिको ठूलो भण्डाफोर नगरौँ यहाँ । शक्ति र पँहुचको अभ्यास गर्ने अनि जनताको मत भनौँ वा अभिमतको नाममा राज्यकोष झ्वाम पार्न कत्तिपनि लाज नपचाउने हाम्रो संस्कार मात्रै बुझेपनि शासक र देशको अवस्था आफै प्रस्टिन्छ । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा ७ मा संसदका पदाधिकारीले एउटा मात्रै सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, सभामुख कृष्णबहादुर महरा अनि राष्ट्रिय सभाध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले ४–४ वटा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे र महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई पनि २–२ वटा गाडी चड्दै हुँइकिरहेका छन् ।
सरकारी सुविधाको गाडी कब्जा गरेर पेवा बनाउने नेता र मन्त्रीको पनि कमि छैन यहाँ । हरेक पार्टीमा यस्तो प्रबृत्ति झांगिएको छ । तर बिडम्बना देशको सुदुर भनेर चिनिने कर्णालीमा जनता भोकभोकै बाँचिरहेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आय आर्जन र स्थानीय स्रोत साधनलगायतको अभावले कर्णालीवासी महिनामा एक दिन भोकै बस्नुपरेको देखाएको छ । करिब ३० लाख जनसंख्या रहेको कर्णालीका २ लाख १० हजार सर्वसाधारण कम्तीमा एक दिन भोकै बस्दैआएका छन् । तर सुविधाभोगी बन्दैगरेका राज्यका अभिभावक भनाउदाहरुलाई यसको कत्तिपनि मतलब छैन । केबल मतलब छ त कमाउ अनि रमाउको मात्र ।
जनतालाई गास, बास र कपासको सुनिश्चितता गर्न नसक्ने राज्यले केही बर्षमै सम्बृद्धीको छलाङ मार्ने कुरा गर्नु केवल आश्वसन र भाषणमा फुत्किएको गफ मात्रै नहोस्, प्रधानमन्त्री ज्यू । यो हाम्रो होइन, जनजनको प्रश्न ।
क्याटेगोरी : ओझेलका पात्र, जीवन भोगाई, देश / प्रदेश, समाचार